Gareth Bale Oo Ka Hadlay Xaaladii Adkayd Ee Uu Xagaagan Soo Maray, Eedeymaha Loo Soo Jeediyay & Hadii Uu Nacay Kubada Cagta (Wareysi Dhameystiran) - Gool24.Net
Gareth Bale Oo Ka Hadlay Xaaladii Adkayd Ee Uu Xagaagan Soo Maray, Eedeymaha Loo Soo Jeediyay & Hadii Uu Nacay Kubada Cagta (Wareysi Dhameystiran)
Weeraryahanka Real Madrid Gareth Bale ayaa la hadlay saxaafada isagoo la joogo xulka qarankiisa Wales, waxaana uu ka hadlay xaaladiisa haatan ee Bernabeu, eedeymaha loo soo jeediyay iyo jaceylkiisa ciyaarta golf-ka.
Miyaal saldhigatay ka dib xagaa adag oo ku soo maray?
Waan u maleynayaa. Xaald fiican ayaan ku jiraa oo aanan ku jirin xagaagii. Tababar buuxa ayaan qaatay isbuucaan waxaana isha ku hayaa kulanka berri. Waxaan u baahanahay inaan wadada guusha ku soo laabano, waana taas waxa aan isku dayi doono inaan sameyno.
Eedeymaha laguu soo jeediyay ka waran?
Ma dhageysto sababtoo ah ma garanayaan waxa ay ka hadlayaan! Ma akhriyo jaraa’idka. Dadka intiisa badan ma fahamsana xaalada.
Miyay ku saameysay xaalada suuqa kala iibsiga ee xagaaga?
Wax sidaas u badan saameyn iguma yeelan, fasax fiican ayaan qaatay xagaagii. Madaxeyga ayaa hoos u raaciyay kulamadii saaxiibtinimo, wax badan ayaa la iga sheegay wanaag iyo xumaan laakiin si adag ayaan ugu shaqeynayay tababarka. Wixii si gaar ah u dhacay waxay ku ekaanayaan kooxda laakiin haddii aad jawaabo rabtaan waa inay weydiisaan Real Madrid.
Xagaagan ma kii kugu adkaa baa?
Iima fiicneyn laakiin sidoo kalena kuwa ka xun ayaa i soo maray. Waxaan xusuustaa sannad dhan oo aan u dheelin Harry Redknapp. Xagaa fiican iima aheyn laakiin haatan waa laga soo gudbay waana garanayaa sida loo maareeyo. Waa inaad madaxaaga kor u qaado oo aad i adag u shaqeyso. Kulamadii saaxiibtinimo si fiican ayaan tababar u sameeyay.
Miyaa dib u heshay jaceylka aad u qabto kubada cagta?
Marnaba igama dhumin jaceylka kubada cagta. Waxaa lacag la igu siiyaa inaan kubad ciyaaro. Waxaan ahay xirfadle. Waxaad ku soo mareysa xilli fiican iyo xilli xun laakiin waa inaad si adag ugu shaqeyso tababarka. Haddii xaalada aysan aheyn sidii aad rabtay, sida kaliya aad uga bixi karto waa adigoo si adag u shaqeeya.
Jaceylkiisa Ciyaarta golf-ka
Dabcan isboortigeyga koowaad ee kubada cagta. Golf waxa uu ii yahay baashaal sida waxyaabaha kale. Ma jiraan wax ka qaldan in la ciyaaro golf, dadkuna wax aan waxba aheyn ayay ka dhigayaan wax weyn. Waan ku riyaaqaa ciyaarista golf-ka waxaana ay iga caawisaa inaan ka nasto garoonka kubada cagta.